Bekugoso okwaphukayo kwimidlalo yabaselula – Grocott's Mail
You are at:Home»SPORT»Bekugoso okwaphukayo kwimidlalo yabaselula
Bekugoso okwaphukayo kwimidlalo yabaselula
Bekugoso okwaphukayo kulempelaveki esisuka kuyo nalapho bekubanjwe imidlalo yabo bangaphantsi kweshumi elinesithathu neminyaka engaphantsi kwelishumi elinesihlanu. Kwimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu iCity Pirates ibhaxabule iAfrican Spears ngamanqaku asithoba kwelinye, logama iLakhenathi ibethe iJoza Callies ngamane kwamathathu, yaze yona iGolden Brothers yabetha iMaru ngamanqaku amane kwamathathu.
INewseekers ibhaxabule iYoung Eagles ngamanqaku amahlanu kwamabini kumdlalo okhe wanqumama ithutyana emva kokuba uSompempe eye watshovela ngaphandle umdlali obefumene ikhadi elibomvu. Umqeqeshi weEagles kuye kwanyanzeleka ukuba angene anqandele umdlali wakhe, wayalela uSompempe ukuba abeke impempe phantsi alishiye ibala naye nanjengoko eye wabonakalisa ubundlobongela kumdlali oselula nobengaxhobanga.
Uye waphinda waqhuba emva koko umdlalo ugqityezelwa ngomnye uSompempe. ISophia Stars ibethe iBlack Stars ngamane eqandeni, yaze yona iCameroon yabetha iGrahamstown United ngamanqaku amane kwamabini.
Kwimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesihlanu iGolden Brothers ibethe iMaru ngamanqaku asixhenxe eqandeni logama iSophia Stars ibethe iBlack Stars ngamane eqandeni, yaze yona iCity Pirates yabetha iAfrican Spears ngamathathu kwelinye.
ICameroon ibethe iGrahamstown United ngamabini eqandeni yaze yona iYoung Eagles yaziphindezela kwiNew Seekers ngamanqaku amahlanu eqandeni. Ziliqela iziganeko ezehlileyo kulemidlalo yabaselula kwaye lifikile ithuba lokuba abo basemagunyeni baphakame baqinisekise ukuba kuncothulwa neengcambu konke okungalunganga kulemidlalo.
Ukuba banyanisekile ngokwenene ngophuhliso lwebhola yalapha eMakhanda mabaphakame babonakalise inkathalo kule ibhola yaba baselula. Makungalindwa kude konzakale umdlali okanye umqeqeshi phambi kokuba kulungiswe izinto.
Previous ArticleThrills as league kicks off
Next Article Cousins ensures memorable win for Willows